လုပ်ဆောင်ချက်များ - KBZPay
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုအမြန်ဆန်ဆုံး မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်KBZPay မှ ယခုအခါ မိုဘိုင်းကနေ တစ်ဆင့် ချေးငွေလျောက်ထားလို့ရတဲ့ KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေနှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်ချေးငွေတို့ကို စတင်မိတ်ဆက်ရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ KBZPay ချေးငွေနဲ့ဆိုရင် အကုန်အဆင်ပြေလွယ်ကူနေပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် နှိပ်ပါ။
KBZPay မှာအသစ် ပါဝင်လာတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်၊ လူမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်၏ ပရိုဖိုင်တို့ကြောင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက် လိုတာတွေကို အစဉ်ပြေပြေ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုက်တဲ့ MPUကတ် ကနေ တစ်ဆင့် KBZPay ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို ငွေတိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှု အမြန်ဆန်ဆုံး မိုဘိုင်း ပိုက်ဆံအိတ် KBZPayမှ ယခုအခါ မိုဘိုင်းကနေ တစ်ဆင့်ချေးငွေ လျောက်ထားလို့ ရတဲ့KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေ နှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်ချေးငွေ တို့ကိုစတင် မိတ်ဆက်ရင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါပြီ။ KBZPayချေးငွေနဲ့ ဆိုရင်အကုန် အဆင်ပြေ လွယ်ကူနေပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် နှိပ်ပါ။
Biometric Pin Reset
မိမိရဲ့ PIN နံပါတ်ကို Biometric အိုင်ဒီ နည်းပညာဖြင့် မျက်နှာအတည်ပြုပြီး လျှို့ဝှက် PINနံပါတ် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း စနစ်ကြောင့် သင့် KBZPay မိုဘိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကာကွယ်ပါ
KBZPay ကို အခုမှ စသုံးမှာလား? စာရင်းမသွင်းခင် မှာတင် app ထဲမှာ ဝင်အစမ်း လေ့လာကြည့်လို့ ရပါတယ်။ KBZPayက သုံးရတာအရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။
KBZPay လူမှုဝန်ဆောင်မှု မှာ ဘေလ်ပေးဆောင် မလား ဖုန်းငွေဖြည့်မလား ဈေးဝယ်တာဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားဖို့ လက်မှတ် ဖြတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်သမျှ အကုန်လုံးကို လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
ဆိုင်ရာကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊ ချေးငွေလျှောက်
ထားနိုင်ခြင်းတို့ အားလုံးကို KBZPay ပိုက်ဆံအိတ် စာမျက်နှာကနေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ကူပွန်များ၊ ဘာသာစကား ရွေးချယ်ခြင်း၊ PIN ပြောင်းလဲခြင်း တို့အတွက် ပရိုဖိုင်း စာမျက်နှာမှာ လုပ်ဆောင် နိုင်ပါပြီ။
Appထဲမှတိုက်ရိုက် ငွေချေဝယ်ယူမှု တိုင်းအတွက် အထူးလျှော့ဈေး များနဲ့အတူအထူး အစီအစဉ်များ ရှိတာကြောင့် မိမိ ကြိုက် နှစ်သက်ရာ ဆိုင်များတွင်ကူပွန် လျှော့ဈေးများကို KBZPay နဲ့ ငွေချေတိုင်း အလိုအလျောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုသက်သာစေမယ့် KBZPay!
၂၄ နာရီ ၇ရက်လုံး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဖုန်းထဲကနေ တစ်ဆင့် အခမဲ့ချက်ချင်း ငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေကိုငွေလွှဲဖို့ အတွက် တကူးတက အိမ်ပြင်ကို ထွက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ငွေလွှဲလက်ခံ ရရှိကြောင်းပြေစာ ကိုယ့်ဆီမှာလည်း လက်ခံရရှိ တာကြောင့် အရင်ကထက်ပိုပြီး လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာရောက် နေနေ KBZPay ထဲ ကနေ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ တယ်လီဖုန်းလိုင်း တိုင်းအတွက် (အူရီဒူး၊တယ်လီနော၊ အမ်ပီတီ Mytelနှင့် MECTel) ဖုန်းဘေလ်များကို ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
ဘေလ်ပေးဆောင် ခြင်းများကို အချိန်ကုန်ခံတန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေစရာ မလိုဘဲ ဘယ်နေရာ ရောက်နေနေ ၂၄နာရီ၇ရက်လုံး အဆင်ပြေလွယ်ကူ စွာပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
ငွေသားမဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် နဲ့သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်း ဖုန်းထဲကနေ ငွေကြေးကိစ္စ တွေကို စီမံနိုင်ပါပြီ။
ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ငွေလက်ခံ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
KBZ ၏ ATM ၁၅၀၀ ကျော်တွင် KBZPay ဖြင့် အခမဲ့* ငွေထုတ်နိုင်ပါပြီ။ *လစဉ် ၉သိန်းနှင့်အထက် ငွေထုတ်ယူမှုတိုင်း အတွက် အခကြေးငွေ ရှိပါသည်။
လေယာဉ်လက်မှတ် များနှင့်ဘတ်စ်ကား လက်မှတ်များကို အပ်ပလီကေးရှင်း ထဲမှတိုက်ရိုက် ကြိုတင်ဘွတ်ကင် လုပ်နိုင်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သင်သွားချင်သည့် မည်သည့်နေရာကို မဆို KBZPay က ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Mobile Legends, Steam Wallet Codes, PUBG စသည့်ဂိမ်းများနှင့် အခြားဂိမ်းများ အတွက် လက်ဆောင် Gift Cardများ ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ မိမိအတွက် တင်မက သူငယ်ချင်းများ အတွက်ပါဝယ်ပေး လို့ရတဲ့ KBZPay ထဲကနေ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖျော်ဖြေရေးများကို ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
QuickPay လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် သင်အကြိုက်ဆုံး အရောင်းကုန်ဆိုင် များသို့ app ထဲမှ တဆင့် တိုက်ရိုက် ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း
အလှူငွေလိုအပ် နေတဲ့နေရာတွေကို KBZPay ထဲကနေ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းလို့ ရနေပါပြီ။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို ကူညီရတယ် ဆိုတာက ပြောသလောက် မလွယ်ကူပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဆီကနေ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်း လို့ရတဲ့နေရာတွေ ထဲက စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး အကောင်းဆုံး ကူညီလှူဒါန်း နိုင်ပါပြီ။
အနီးအနားရှိ Nearby ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အရောင်းကုန်ဆိုင် များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း။
ပွဲတော်အချိန် သာမယတွေကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူဆင်နွှဲ ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။ အားလုံးပါဝင် ဆင်နွှဲနိုင်ပြီး ပါဝင်သူတိုင်း ဆုတွေအသီးသီး ကိုယ်စီရကြတဲ့ မုန့်ဖိုးအစီအစဉ် မှာပါဝင်ဖို့ အရမ်းကို လွယ်ကူလျင်မြန် ပါတယ်နော်။